FAALLO: Soomaaliya waa inay Suuriya ka xaal marisaa GODOBTA ay ku guddey abaalkii loo galay!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka FAALLO: Soomaaliya waa inay Suuriya ka xaal marisaa GODOBTA ay ku guddey...
FAALLO: Soomaaliya waa inay Suuriya ka xaal marisaa GODOBTA ay ku guddey abaalkii loo galay!!
(Hadalsame) 25 Maarso 2019 – Maalin dhowayd waxaa soo baxday inay Soomaaliya ka mid ahayd 5 dal oo qura oo ka aamusay inay cambaareeyaan haysadka Israel ee dhulka Golan Heights oo ay Suuriya leedahay.
Arrintan ayaa weliba kusoo beegantahay jeer ay xasaasi tahay arrinta ku xeeran Golan Heights kaddib markii uu Khamiistii tagtay uu Maraykanku sheegay inuu dhulkaa u aqoonsanayo mid si rasmi ah uga mid ah dhulka Israel ay horay Carabka uga dhacday ee iminka lagu magacaabo Israel.
Arrinta fajaca lihi ma aha oo qura ka aamusidda Soomaaliya oo ka dhigan wareegid 180 decree ah, tiiyoo ay misna la yaab lahayd inay Soomaaliya kasoo horjeesatey in ay Israel dhulkaa degaamaysato, taasoo micne tireeysa moowqifkeeda, waayo haddii aadan ogolayn in ay degaamaysato waxaad qiraysaa inaysan lahayn, haddii aysan lahayna ma jirto sabab aad uga aamusto inay haysadkeeda la cambaareeyo. Si kastaba, waxay ahayd tillaabo diblomaasiyadeed oo aad u ceebaysan.
Yeelkeede, arrinta kasii darani waxay tahay in Suuriya ay koow ka tahay dalalka dhifka ah ee Carbeed ee sida qiyamka iyo sharafta leh ula dhaqmay una soo dhoweeyay shacabka Soomaaliyeed xilligii burburka.
Soomaaliya waa dal magac ahaan ka tirsan ururka fadhiidka ah isla markaana ma dhalayska ah ee Jaamacadda Carabta, balse saasoo ay tahay dalal yar oo Carbeed ay Soomaalida u ogolaaday inay dalkooda nabad ku joogaan iyagoo aan caqabado badan la hor dhigin.
Waxaa dalalkaasi ka mid aha Masar oo saaxiib xeeladeed ah, tusaale ahaan, ma ogola inay Soomaalidu si sahlan dalkeeda ku gasho, sidoo kale ganacsi muuqda ma ogola, balse marka uu qofka Soomaaliga ihi yimaado ugu yaraan wuu iskaga noolaan karaa.
Dalka Yaman oo ah dalka qura ee Carbeed ee ogolaaday inay Soomaalidu xeryo qaxooti ku yeelato, waloow aysan wax kale u qaban, dabcanna uba qaban karin. Dalka Suudaan oo isna ilaa xad Soomaalida sharfay.
Balse waxaas oo dhan waxaa dhanka qiimaynta, soo dhowaynta iyo caawinta ku dhaamey dalka Suuriya oo la oran karo Soomaaliya waxay ilaa xad ku leedahay abaal wayn in kastoo aysan dad badani ku baraarugsanayn.
Suuriya waxay Soomaalida uga kacday fadhiga, marka laga soo tago inay u ogolaadeen inay si qiime leh ugu noolaadaan dalkaasi, waxay sidoo kale Suuriya Soomaalida ku caawisay wixii tabarteed ah.
Waxay sidoo kale Suuriya ka mid ah laba dal oo qura oo Islaam ah oo Soomaalida Fiisaha ku siinayay marka ay garoonka kasoo degaan (on arrival), dal kale waa Malaysia.
Haddaba, maadaama ay Suuriya dal ahaan abaalkaa Soomaaliya u gashay waxay ahayd dhirbaaxo wejiga looga dhuftay shacabka Soomaaliyeed iyo xitaa abaalkii Suuriya in ay Soomaaliya la timaado wax lagu sheegi karo suququl diblomaasiyadeed oo aan la garanayn danta ku jirta iyo waxa Soomaaliya ku kallifay.
Waa run in aysan Carabtu guud ahaan Soomaaliya ula damqanin sidii ay ka mudnayd, weliba ay hagar daamooyin ugu sii dareen, balse marka ay joogto Carab iyo Israel waxaa waajib nagu ah inaan hiillo u muujinno Carabta, gaar ahaan ma aha in Suuriya oo aan annaga dal ahaan wax eed ah naga gelin aan godob ka galno.
Kaaga darane, aamuskeennu waxba kama gooynin qaraarkan oo wuu meel maray, balse magac unbaa naga raacay aan cidina abaal nooga haynin, sidaa darteed, Wasaarad Dibadeedka Soomaaliya waa inay umadda Soomaaliyeed u sharraxdaa sababta ay arrintani ku dhacday iyo waxa ku xambaaray.
Waxaa sidoo kale waajib ah in Suuriya loo sharroxo waxa dhacay, haddii ay lacalla arrintani ku timid khalad ka yimid dhanka qofkii aamusay, balse aysan ahayn moowqif guud oo Soomaaliya ka yimid.
Previous articleDAAWO: Muslimiinta New York oo yeeshay ROONDO u gaar ah + Sawirro
Next articleDAAWO: Somaliland xuquuq dastuuri ah ma u leedahay inay baacsato ama xirto weriye Coldoon?